कुलमानको अनुरोध ग्याँसको लाइनमा नबस्नुहोस बिजुलीमै खाना पकाउनुहोस ! यो अनुरोधलाई सेयर गरेर ३करोड नेपाली माझ पुराउनुहोस् ! « Online Tv Nepal
कुलमानको अनुरोध ग्याँसको लाइनमा नबस्नुहोस बिजुलीमै खाना पकाउनुहोस ! यो अनुरोधलाई सेयर गरेर ३करोड नेपाली माझ पुराउनुहोस् !
Published : 17 March, 2020 3:58 pm
खाना पकाउने ऊर्जाको मूल्यबारे नेपालमा भएको सम्भवतः यो नै पहिलो अध्ययन हुनसक्छ । उक्त अध्ययनले सन् २०१९ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको बिजुलीको विद्यमान मूल्यअनुसार, ५ जनाको परिवारले १५ एम्पियरकोविद्युत् महसुल अनुसार खाना बनाउन मट्टितेल प्रयोग गरियो भने मासिक १२ सय ४० रुपैयाँ खर्च हुने देखाएको थियो ।त्यस्तै अहिले अत्यधिक प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासमा ५ जनाको परिवारलाई खाना बनाउँदा एक महिनामा १४ सय ७८ रुपैयाँँ खर्च हुन्छ ।बिजुलीको जुनसुकै माध्यमबाट ५ जनाको परिवारलाई खाना पकाउँदा ११ सय १४ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने देखिएको छ !